Soo Saaraha Timaha Jumlada Timaha Jumlada Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Enimei
4 1 timo gooye ah: Timaha gooya sanka & xiirashada jirka & xiirashada wajiga & suniyaha gooya si loo daboolo baahiyahaaga timo kala duwan, xulashada ugu haboon ee jirka oo dhan looga saarayo timo jarista aan xanuunka lahayn.
Amaan & Xanuun la'aan: Timaha gooyuhu waxay isticmaalaan saxan sare oo birta birta ah ee raaxada leh, ma dhaawaceyso maqaarkaaga. Timaha kama jiido maqaarka laakiin waxay ku dhawaataa xididka timaha.
Si fudud loo isticmaalo & loo nadiifiyo: Madax kala duwan oo la beddeli karo ayaa fududaynaysa in si sax ah loo jaro timaha aan loo baahnayn. Heerkeeda biyuhu waa IPX6 waxayna kuu ogolaaneysaa inaad madaxyada jarista ku mayrto biyo socda si toos ah.
USB dib loo qaadi karo oo la qaadan karo: Kani waa shaar yar oo aan xadhko lahayn oo xiira oo ku shaqeeya bangiga tamarta, xeedho USB, laptop ama aalado wax lacag bixiya, kuwaas oo aad xor u tahay inaad isticmaasho wakhti kasta iyo meel kasta. Weligaa ha ka welwelin inaad xishood ku keento joojinta shaqada.
1. Noqo carefrul inta aad u isticmaaleyso taabashada maqaarka.
2. Daboolka ka qaad, si aad u hubiso in daabku uusan waxyeello lahayn ama aan qaab u yeelan.
3. Haddii badeecadaadu shaqeyn weydo ama codka matoorku ku dhawaaqo samll markii uu daarnaa "DAAR", fadlan mar kale lacag sii.
4. Qalabka saar maqaarka, si tartiib ah ugu dhaqaaq foomka.
5. Demi korontada dabool daboolka difaaca.
6. Talooyin ku saabsan sida loo buuxiyo: markii ay wax buuxinaysay, ileysku wuu casaan noqonayaa, amarka buuxa ka dib, nalku wuu joogsan doonaa, wuu dami doonaa.
- Lipstick Mini Portable wuxuu qaabeeyaa timaha wajiga
- Fiijiye timo aan xanuun lahayn, hab hypoallergenic ah oo looga saaro timaha wajiga iyo jirka ee aan loo baahnayn
- Biyo-la'aan, IPX6
- Ku habboon dumarka
1. Xagee lagu sasabaa?
Mindhicirka mid-midi wuxuu ku siinayaa jidh siman: Goo sunnayaasha Am / Lugaha / Timaha sanka / Dibnaha
2. Afar-hal-xiiraha, daryeelka maqaarka
Maydhista jirka buuxa / USB interface 1 xiirashada deg deg ah
3. 3D shaashadda mindi dul sabaynaysa
Naqshadeynta madaxa cutter wuxuu kaa dhigayaa inaad ku raaxeysato isticmaalka
4. Si fudud u xoqin sunnayaasha
ka walwalka dhaawaca maqaarkaaga
6. Kala fur madaxa madaxa, si sahlan loo beddelo
Madax xiirto kala duwan si loogu badalo dhaqso
7. Mid xiirayaal ayaa fulin kara 4 ujeedo
Afar madax-gooye (sunniyaha timingsidburn timmingHnose tiingshaven)
8. Waxaad timaha ka xiiri kartaa dhammaan qaybaha
jidhku wuxuu leeyahay timo jilicsan oo jilicsan
Shaver for marwooyinka
9. Ka ilaali timaha sanka inay ku baxaan banaanka
ragga iyo dumarkuba way isticmaali karaan
Timo gooye sanka
10. Jir toosan, is haysta oo la qaadi karo
Waxaad ku ridi kartaa boorsadaada qurxinta oo waad u isticmaali kartaa sida aad u socoto
Khibrad raaxo leh, aan hoos u dhigo
11. Maydhida jirka oo buuxa
Waxaa loo isticmaali karaa qalalan ama qoyan
USB ku-dallaca habboon
Amraya waa mid aad u habboon
waxaad ka qaadi kartaa lacag meel kasta
12. 3D madaxa xiirid sabaynaysa
Bidix iyo bidix sabayn, ciribtir adag maqaarka / Deegaanka Bikini / Waji / Dibnaha / Kilkilaha / Am / Lugaha
Hore: Buugga la qaadan karo ee la qaadan karo ee korantada birta aan lahayn ee birta sanka timaha gooya
Xiga: Gariir biyuhu Water silikoon Maydho burush la Long qabashada
Dhegta iyo Sanka Timaha jarista
Timaha Sanka Timaha
Korontada Sanka Korantada Timaha
Ragga Timaha Jaraya
Ninka Simaha Timaha Timaha
Ragga Sanka Timaha Gooya
Timaha Timaha jar
Timaha Sanka loo jarayo Ragga
Timaha sanka gooya Dib loo cusbooneysiin karo
Ragga Dib Loogu Soo Celin Karo Timaha Sanka
Timaha Sanka loo Qaadan Karo Ragga
Haweenka Trimmer Ka Saarida Jirka
Manual Wareegsan karo Manual Electric ahama ...